URob Zombie Uqinisekisile ukuthi ifilimu yakhe elandelayo izolungisa i-'Munsters 'TV Sitcom
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo URob Zombie Uqinisekisile ukuthi ifilimu yakhe elandelayo izolungisa 'i-Munsters' TV Sitcom
URob Zombie uyikhadi lasendle kancane. Kusuka ku- Indlu Yezidumbu Eziyinkulungwane kuya 31, I-Zombie ibingamandla okubalwa kanye nenani eliphelele lokwehlukanisa phakathi kwabalandeli. URob Zombie uzisholo yena uqobo AbakwaMunsters oshisekayo ngokweqile. Waze waboleka izwi lakhe ekuphawuleni kwakamuva kwe AbakwaMunsters ithrekhi yokuhlaziya i-blu ray. U-dude, unenduku eshisayo yangokwezifiso ebizwa nge-Dragula AbakwaMunsters imoto. UZombie manje usewaqinisekisile amahemuhemu akholwa kudala ukuthi uzothatha indawo ye-TV sitcom AbakwaMunsters.
Kubukeka sengathi iqiniso lokuthi iZombie elibhekise eBudapest ukuyosebenza kuphrojekthi ngasekupheleni konyaka empeleni kuyiThe Munsters. Siyethemba ukubona abajwayelekile kufayela le-AbakwaMunsters indumezulu. Ukuqala ngonkosikazi uSheri Moon Zombie njengoLily Munster, noJeff Daniel Phillips ukuze badlale uHerman.
Izithombe ze-Universal azikaqinisekiswa njengamanje. Kepha, sinethemba lokuthi lokhu kuyiqiniso nokuthi iZombie akuyona i-foolin '. Kuyahlanya ukucabanga nge-PG noma i-PG-13 Zombie film. Kodwa-ke, ngicabanga ukuthi u-Eli Roth wakhipha nayo Indlu Enewashi Ezindongeni Zayo, ngakho-ke mhlawumbe kungenzeka.
Ngabe nina bantu nicabangani ngokubandakanyeka kukaRob Zombie kufayela le- Ama-Munsters ukujwayela? Ucabanga ukuthi nguye ofanele? Sazise esigabeni sokuphawula.
I-House of Wax iza nomqokeleli we-blu ray oqoqwa ngabakwaScream Factory kungekudala. Funda kabanzi bese u-oda ngaphambili ikhophi yakho lapha.
Rob ZombieAmaSitcomsAbakwaMunstersUniversal Isithombe